Andro: 21 Desambra 2019
Conveniently, Verdi Evanjely Voalohany Export fiaran-dalamby avy any Torkia handeha ho any Shina
Torkia, iray Belt Road iray Revitalization Project ny namorona ny lalana haingana indrindra lalamby eo amin'i Shina sy Eoropa mbola hifampiraharaha lasibatra noho ny lalantsara afovoany. T Manager General TCDD Ali İhsan Uygun [More ...]
Fampahalalana momba ny lalambe vaovao East East Express
Lalana East East Express: mihamitombo ny fahaiza-manaon'ny East Express, izay miasa sy malaza be eo anelanelan'ny faritany Ankara sy Kars. Eastern Express, izay manome fampahalalana momba ny fotoana fialana sy ny vidin'ny fitaterana ary [More ...]
Bayirköy Mahmudiye Derebaşı Ny lalana iray mankany amin'ny iray
Vitan'ny Kaomina Metropolitan Ordu ao amin'ny tanànan'i Mesudiye Bayirköy Mahmudiye Derebaşı Lalambe tokana sy tetezana nosokafana ho an'ny serivisy fanokafana. Ben'ny tanànan'ny kaominina Ordu Metropolitan no nandray anjara tamin'ny fandaharana. Mifandraisa mivantana amin'i Hilmi [More ...]
İlker Başbuğ: Mizara roa ny sezera raha Istanbul ny fantsona
Ny lehiben'ny mpiasa jeneraly faha-26, Ilker Basbug, tamin'ny fanombatombany ny tetikasa Channel Istanul dia 'mizara roa ny Channel raha Istanbul Thrace' hoy izy. Lehiben'ny mpiasa jeneraly faha-26 Gen. İlker Başbuğ, Salerturk TV mampiady hevitra [More ...]
Ny fandaharan'asa momba ny toekarena dia noresahina tao amin'ny OSTİM
Ny Ben'ny tanàna Yenimahalle Fethi Yaşar dia nanatrika ny fivoriana nokarakarain'ny indostrian'ny indostriansy sy ny mpandraharaha miasa ao amin'ny Ost ZoneM Organized Industrial Zone. Ny fivoriana dia natrehin'ireo mpanamboatra avy amin'ny sehatra maro toa ny fiarovana, fahasalamana, fitaovana fananganana ary fananganana. [More ...]
Hijanona eo amin'ny garan-dalamby any Pamukova ve ny Bosporus sy Ankara Express?
Hijanona eo amin'ny garan-dalamby any Pamukova ve ny Bosporus sy Ankara Express ?; Tsy nijanona teo amin'ny Station Pamukova any Sakarya ny Bosphorus sy Ankara Express ary niteraka fanehoan-kevitra. Ekipa teknika rezionaly TCDD 1st ao amin'ny Station Pamukova [More ...]
Filazantsara Gondola mankany amin'ny Distrikan Canik ao Samsun!
Filazantsara Gondola mankany amin'ny Distrikan Canik any Samsun! Janik nihaona tamin'ny mponina tao Hacıismail manodidina ny Samsun Metropolitan ben'ny tanàna Monisipaly Iron, "iray amin'ireo tsara indrindra Tiorkia Ski manandratra Ho isika hanangana Janik," hoy izy. Tetikasa “Ben'ny tanàna ao an-tanàna” Canik Munisipaly [More ...]
Nizara ny sariny tao anaty fiara teo an-toerana ny Minisitra Varank; Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety tany Malaysia, nanambara ny praiminisitra sy mpitarika ny AKP Recep Tayyip Erdoğan fa hampiditra ny fiara eo an-toerana amin'ny 27 desambra izy ireo. [More ...]
Ny Orinasa Tiorka dia mitaky ny zon'ny Montenegro hanao asa-tanana ny seranam-piaramanidina Tivat sy Podgorica
Ny tsenan'i Montenegro "Tivat sy Podgorica International Airports 30 Taona Operational Right" dia nangonina. Cengiz Fanorenana avy any Torkia, tav Nihazonako sy Limak any amin'ny bidders. Airport Tivat [More ...]
Yahya Kaptan Yonca Junction Fananganana Fanamafisana
Yahya Kaptan Yonca Junction Fananganana Fanamafisana; Kocaeli Metropolitan Munisipaly, izay nanosika ny faritra teny an-dàlana, ny tetezana sy ny sampanan-dàlana any Kocaeli, dia manohy ny asany ao anatin'ity toe-javatra ity. valan-javaboary [More ...]
FiomananaPark Vonona amin'ny horohoron-tany sy Afo
Ny tantaran'ny drill izay nitranga tao amin'ny Direction Générale d'AntananarivoPark, iray amin'ny mpiara-miasa amin'i Kocaeli Metropolitan Munamis, dia tsy nikaroka ny marina. Ilay horohoron-tany tany Istanbul Silivri 7.1 nisesy dia nanomboka tamin'ny feo mahery. 20 segondra alohan'ny mpiasan'ny horohorontany [More ...]
Ny Tunnel Eurasia dia mitahiry lavaka 1,2 tapitrisa tapitrisa isan-taona
Ny Tunnel Eurasia, izay napetraka tamin'ny 20 desambra 2016 mba handraisany anjara amin'ny lasibatra fitaterana an-tanàn-dehibe any Istanbul, dia namonjy manodidina ny TL 1,2 miliara tamin'ity taona ity. Terry Eurasia tamin'ny 20 desambra 2016 [More ...]
Fikaroham-boafidy avy amin'ny TCDD sy ny fikaon-doka amin'ireo valin'ny fanaraha-maso amin'ny vava; Vokatry ny fanadinana am-bava (Voaro-fady) nataon'i TCDD Taşımacılık A.Ş tamin'ny 03.10.2019 dia efa nambara. Tsindrio eto raha hijery ny valiny. Kandida mandresy [More ...]